La socodsiin cusub: Quraac iyo Qado lacag la’aan ah oo la siinayo caruurta oo dhan | Updates
La socodsiin cusub: Quraac iyo Qado lacag la’aan ah oo la siinayo caruurta oo dhan
Lacag ay bixisay hay’adda USDA awgeed, qado iyo Quraac lacag la’aan ah ayaa loo helayaa dhammaan ardayda iskuulada Nawaaxiga Osseo.
Iskuulada Hoose (Qaabka Waxbarashada Isku-dhafka)
Quraac iyo Qado lacag la’aan ah ayaa la siin doonaa ardayda iskuulka jooga maalmaha ay leeyihiin Imaanshaha. Dhamaadka Maalinkasta oo ay iskuul leeyihiin, xidhmooyin qado iyo quraaca ah ayaa ardayda la siin doonaa si ay guriga ugu qaataan. Haddii aadan arabin in ilmahaaga cunto la soo siiyo maalmaha ay guriga wax ku baranayaan fadlan dooro adeega ma rabo. Bacaha cuntada ee dhamaadka usbuuca ayaad heli kartaa oo aad ka qaadan kartaa jidka dhiniciisa dhammaan iskuulada dhexe iyo sare ee degmada 279 laga bilaabo 7:00 subaxii ilaa 1:30 duhurkii laga bilaabo Jimcaha Nov. 13.
Iskuulada dhexe iyo Sare – (qaabka waxbarashada durugsan; aan ku qornayn Akadeemiyada waxbarashada Durugsan).
Laga bilaabo Nov. 9, Quraac iyo qado lacag la’aana ayaa la bixinaysaa oo aad ka qaadan kartid jidka dhiniciisa, Isniin – Jimce laga bilaabo 7:00 subaxii ilaa 1:30 duhurkii laga bilaabo Jimcaha Nov. 13. Bacaha cuntada ee dhamaadka usbuuca oo lagu daray cuntada Jimcaha waxaa la heli karaa Jimceyaasha. Uma baahnid inaad is qortid si aad u qaadatid cunooyinkaas, keliya kaalay oo qaado. Haddii aadan awoodin inaad cuntada ka qaadato jidka dhiniciisa oo aad rabto in lagu keeno, fadlan wac 763-315-7691.
Academy Ardayda ka diiwaangashan Akadeemiyada Waxbarashada Durugsan
Cunto lacag la’aan ah oo bacaysan oo usbuuca oo dhan ah ayaad heli kartaa inaad qaadato Jimcayaasha. Cuntooyinkaas bacaysani waxay ka kooban yihiin todoba quraacood iyo todoba qado oo loogu talogalay in la isticmaalo Isniinta-Axada soo socda. Menu ga waxaa laga eegi karaa district website; menu gu wuxuu tusaya si la mida menu ga ardayda DLA.
Fadlan ogow: Cuntada lacag la’aanta ah ee bacaysan ee usbuuca waxaa la heli karaa oo keliya haddaad hore u sii dalbato. Haddaad rabto inaad hesho cunto bacaysan, waa inaad isqortaa ugu dambayn 12:00 duhurnimo ee Khamiista ee usbuuca ka horeeya maalinta koowaad ee aad qaadanayso si waqti loogu helo diyaarinta iyo habaynta cuntada. Markii aad isqortid, cuntooyinka waa lagu diyaarinaya usbuuc walba. Haddaad damacdo inaad iska joojiso cuntada bacaysan, waa inaad joojisaa 12:00 duhurnimo ee Khamiista ka horaysa Jimcaha soo socda.